Sales Admin | Century Beverage Co., Ltd. ﻿
•	အချိန်ပေးလုပ်ကိုင် နိုင်ရမည် .
•	ရုံးလုပ်ငန်း အ တွေ့ကြုံ (၂) နှစ် ရှိရမည်
•	အသက် (၂၅- ၃၀ ) ကြား
•	ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည် ။
•	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အ တွေ့ အကြုံ (၂)နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည် .
Sales Admin Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Century Beverage Co., Ltd. Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Food & Beverages/Catering Jobs in Myanmar, jobs in Yangon